Nagu Saabsan - Shiinaha Ningbo Jietong Elektaroonigga Co., Ltd.
Ningbo Jietong Swtich waxaa laga helay Ningbo, China. Abriil, 1994 oo ku takhasusay bixinta tusayaal iyo adeegyo macaamiisha korontada gudaha iyo dibedda labadaba.
Warshadu waxay ku taalaa ETDZ, Ningbo. Waxyaabahayagu waxay daboolayaan: badalida dhagaxa weyn, badalida wareega, badhanka riixa iyo badhanka baabuurta.
Waxaan diirada saareynaa inaan siinno wareegyo aqoon leh oo la isku halleyn karo, anagoo si dhow ula shaqeyna macaamiisheenna adduunka oo idil, laga bilaabo meesha aan ku urursanayno khibrad qaali ah oo macaamil ganacsi kala duwan. Wax soo saarka sanadkii waa ku dhawaad ​​50 milyan.
darteed, alaabadayadu waxay la jaan qaadayaan heerarka RoHS waxayna wataan UL, TuV, ENEC, CE, iyo KEMA, oggolaanshaha amniga.
Tayada iyo Qiimaha:
Jietong Elektaroonigga ayaa ku faanto bixinta ugu ballaadhan uguna ballaadhan oo ah badeecado la sumeeyay oo tayo ahaan qiimo jaban lagu kala qaadi karo. Waxaa taageeray Jieong Elektronik adeegga xirfad-yaqaanka iyo taageerada farsamada, macaamiisha waxay hubin karaan in shuruudaha badeecadooda ay qancin doonaan markasta oo ay codsadaan. Macaamiisha oo dhami waxay helayaan adeeg fasalka ka dhaca wax alla wixii baaxad ah oo ka horjoogsada inuu ganacsigooda si habsami leh u socodsiiyo.
Automotive rookaha Switch , Sub-Ghadafi Toggle Switch , Suber Minier Rocker iyo Lever Handle Switch Wareejinta, Automotive Toggle shido , Automotive Switches Button ka murugeeysan , Switch Automotive Hazard ,